Apple Bhadhara Cash ichave yemberi yekuvandudza yeIOS 11, haizosvika nhasi | IPhone nhau
Apple Bhadhara Cash ichave yekuvandudzwa kwemberi kune iOS 11, haizosvika nhasi
Welcome to the launch of iOS 11, today at 19:00 pm Spanish time tichava neyazvino vhezheni yesisitimu inoshanda kwazvo inowanika. Kambani yeCupertino yasarudza kufambiswa kuvhurwa kwayo kunyangwe hazvo mashandiro eGM pamidziyo yakaita seiyo iPhone 6s haisi sezvaitarisirwa. Asi neIOS 11 pane zvimwe zvakawanda zvitsva kupfuura iyo yakangodzokororwa Control Center.
Ruzivo rwakakosha ndiApple Pay Cash, iyo pakarepo mari yekuchinjisa sisitimu iyo ichazobatanidzwa zvizere neIOS Meseji uye izvo zvinokutendera iwe kutumira mari kumhuri yako uye shamwari nekukurumidza sezvazvinogona. Asi haizosvika nhasi, asi sechikamu cheramangwana iOS 11 kugadzirisa.
Izvo hazvingouyi chete kuIOS 11, asi watchOS 4 ichagamuchirawo iyi yakasarudzika nzira yekuchinjisa mari iyo zvinosuwisa kuti isu hatizokwanise kunakidzwa kubva zvino zvichienda mberi. Uye chenjera, nekuti zvinonyanya kufunga nezvemaitiro ekuwedzera eApple Pay kuSpain ndeyekuti isu hatigone kuishandisa kana. Hatisati takwanisa kuongorora masisitimu zvakadzama, asi kana Apple Pay Cash yakagadzira chikwama chaicho chekugamuchira mari, zvisinei kuti bhangi redu rinoenderana neApple Pay kana kwete, ingangove nzira yakasarudzika nayo kugadzirisa edu mashandisiro uye zvinoshandiswa.
Zvirinani kuti ndiwo marondedzero avakaita kubva kuApple, chairo Apple Bhadhara Cash chikwama chakavakirwa pa ReCode. Nekudaro, isu tichiri kufanira kugara takangwarira nzira iyo ino sisitimu yaizopedzisira yashanda, kunyanya sezvo tiri kushamisika kuti Apple haidi kuwana chero chinhu kubva mune zvese izvi, uye pamwe mari yekuchinjisa inoda kuziva. Ngazvive sezvazviri, Apple yakatosimbisa kuti Apple Pay Cash ichavepo kuti itange muUnited States chete, isu ticharamba takateerera nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Bhadhara Cash ichave yekuvandudzwa kwemberi kune iOS 11, haizosvika nhasi
Ming-Chi Kuo: Apple haizokwanise kusangana ne iPhone X kudiwa kusvika gore rinouya
Kudzosera pakutengesa kwe iPhone 8, iPhone X kukanganisa?